Yolanthe Cabau nemapurisa akateedzera DNA, yakanaka John de Mol kugadzirwa (sezvakaita nhau ye ANP): Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 28 August 2019	• 3 Comments
Mubvunzo wave uchindinetsa kwechinguva: John de Mol ndiye akanyanya mukurusa muNetherlands? John de Mol ndiye muridzi we ANP, General Dutch Press Office uye zvakare weTalpa Network, saka unotanga kushamisika kana asingakwanise kushandisa nzira imwecheteyo kuburitsa nhau dzenhema sezvaanoshandisa kumapurisa akateedzana zvakadai DNA kugadzira. Yolanthe Cabau anogona kutora chinzvimbo chepamusoro mune ino nyowani yemapurisa akateedzana anoita seanokwanirisa zvese zvinangwa zvekuparadzira.
Kwemakore ndanga ndichinyora kuti DNA inoshandiswa seshoko remashiripiti kugadzira fungidziro yekuti iwe unogona kuishandisa kugadzirisa nyaya dzemhondi, asi kuti kuparadzira uku kunoitirwa muchivande kuti ugone kumisikidza dhatabheki renyika kuitira kuti munguva pfupi iri kutevera (pakati pevamwe) genetic manifulation ye huwandu hwevanhu hunogoneka kuburikidza ne5G network (ona pano. Ndokusaka kuparadzira kwakakomberedza 'DNA sedhimoni chishandiso' kunofanirwa kuwedzerwa kusvika pakakwirira. Chinyorwa chemapurisa chinopa fungidziro yekuti unogona kugadzirisa nyaya dzekuuraya dzeDNA kungopararira se, semuenzaniso, nyaya yaJos Brech, mairi nekukurumidza mushure memakore XXUMX yeDNA yeDNA yakawanikwa pane izvo Nick Verstappen's underpants. Izwi rekuti DNA rinofanirwa kuve rakarongedzwa mupfungwa dzako dziri pasi uye chii chingave chiri nani pane kushandisa asterisk saYolanthe kune iyo? Kuwana DNA hakubvumiri chinhu uye kana kamwechete kuti DNA rako riri mudhatabhesi, kururamisira kunogona kusevenza DNA panzvimbo yemhosva kuti uwane mhosva. Iyo DNA yako inogona kutevedzera zviri nyore mulebhu (ona pano).
Mumwe mubvunzo wandinombozvibvunza ndewekuti: Ko John de Mol angave akawana mari yake yemabhiriyoni paTV zvigadzirwa zveTV chete kana mhuri yeDol yakatungamira mukufambisa nhau dzenhema kwemakore? Kupfuura zvese, ivo vane nzira dzese dzavanogona kushandisa, saka zvinoita sekunge kusakwanisa kukwanisa kubvuta humhombwe hweHeineken Peter R. de Vries mukutungamira basa se "mutori wenhau wetsotsi" uye shamwari Cor van Hout, Willem Holleeder, Frans Meijer naJan Boellaard sevatambi vakagadziridzwa.
Iwe unotenda here kuti Willem Holleeder's most test yeko nemunin'ina wake Astrid semutambi mutsva mutserendende akatenderera nemhondi dzinotyisa dzakaitwa? Ko kana ese achingova sipo uye wanyatso kupusirwa. Ko Holleeder haana kuita mupiro wakakosha muhurongwa hwakakura hwekuratidzira mune iro izwi rekuti 'korona chapupu' rakagadziriswa? Iwe unoziva zvinoreva izvo here? Izwi rinoti zvese .. Korona (kururamisa panzvimbo yekorona) inogona kuisawo chapupu mberi. Icho chapupu chinotenderwa kunyange kuramba usingazivikanwe.
Izvo hazvizondishamise kana mhuri ye de Mol yakawana mari yavo yakawanda neyekunyepedzera zvigadzirwa zvakabhadharwa kubva muhari yemutero uye kuti Peter R. de Vries ndiye PsyOp (wepfungwa oparesheni) muratidziri anogona kuishatisa muvanhu. Hazvizondishamisewo kuti zvinhu zvakawanda zvave zvakakura munhau zvaingova manyepo enhau dzenhau. Chekupedzisira, nzira dzese dzinowanikwa muma studio a John de Mol (uye izvo kwemakumi emakore).
Unozviona zvichishamisa here kana ndati handisati ndambotenda kutorwa kwaFreddy Heineken nemutyairi wake Ab Doderer? Izvo hazvina kuisa brand yeHeineken pamepu pasi rese? Pangave pasina kushambadzira kuri nani. Iyo yese inonzi Amsterdam Mafia nzvimbo haina kumbobvira yavapo mumaonero angu. Idzo ingori nyaya dzerudo muchimiro che 'Dambudziko, Reaction, Solution". Iwe unogara uchida mashoma akakura kuti ugone kuita mamwe mamiriro emapurisa. Zvese zvatinoziva nezvazvo zvinobva munhau. Iwe unoziva, kubva kuofficial agency seiya kubva kuna John de Mol. Uye zvirokwazvo kune mabhuku pamusoro pezvakanyorwa nemafirimu kana mitambo yemitambo yakagadzirwa nezvazvo. Kana vagara vari zvigadzirwa zveTV uye vagara vari theatre?
Maitiro eHolleeder, semuenzaniso, airatidza mashandisiro anoita nyaya nevatori venhau uye kuti zvishoma (kana zvisingaite) chiratidzo chinodiwa pakupomerwa. Kuunzwa uye kusimbiswa kwechisimbiso kwekutendiswa kwakavakirwa pazvapupu zve korona uye kutengeswa kwemhuri (pasina chiratidzo chakasimba) Justice anongofanira kutaura kuve neakisingazivikanwe korona chapupu kana kururamisa anongofanira kutenda nyaya yehanzvadzi uye kutendiswa kwakwana. Willem Holleeder naPeter R. de Vries saka vakaita basa rakakosha mukuzadzikiswa kwemitemo mitsva iyi nematare ematare. Maitiro eHolleeder saka maitiro akadai ane mweya wakareba uyo wakapararira kwemakore? Izvo zvinozvijaira uye zvinovimbisa kuti tasvika pakutenda mumufananidzo we 'vakomana vanorema'. Joseph Goebbels akati chii zvakare? "Kana iwe ukareva nhema huru uye uchidzokorora kazhinji zvakakwana, munhu wese achazvitenda".
Kana, semuenzaniso, ini handitendi chero chinhu nezvekurwiswa kwakaitwa muimbi Rob Scholte, uyo (sekureva kwaasina kuzivikanwa) akakodzera kutemwa gumbo semugariro wekurwara nguva pfupi kurwiswa ikoko kusati kwaitika. Panguva iyi ingadai yakashandiswa kukwiridzira? Bhomba remotokari rinogona kuputika sei uye rinogona kunge makumbo aScholte kubvaruka apo "musikana wake" Micky Hoogendijk (uyo anga akagara pachigaro chemutyairi) akabvapo asina zvekukotsirisa (asi aive nehurema)?
Kana iwe ukachirega ichinyura mukati zvakare dzimwe nguva zvinoita sekunge inyaya dzinoshamisa. Ivo ivo, zvakadaro, vanofarira kufunga kwedu, nekuti chakakomba NOS muverengi anozvitaura mune yakarongedzeka sutu uye nekuti iwe unoona mifananidzo nazvo. Asi hongu, John de Mol ane makamera akakwana, vanhu uye zviwanikwa zvekuisa zvinhu pamwechete.
Peter R. de Vries chaizvo anogara aine basa rinotungamira kana zvasvika kumatare makuru emhondi. Ndiye murume akagadzirisa nyaya yemhondi yeMarianne Vaatstra neDNA yemashura. Ndiye murume akasanganisa nyaya yaNick Verstappen mairi nevanhu (neiyo yemashura yeDNA). Iye ndiye chaiye murume ari kumashure kwezviuru zvese izvi (PsyOp?) Nyaya: kubva kuna Anne Faber kuenda kuRomy naSavannah nyaya uye zvese (DNA) zvigadzirwa zvatingatevedzera munhau. Ndinozvidaidza kuti zvigadzirwa, nekuti mushure mezvose, huwandu hwenhau hunobva kune yekuburitsa nhau inoburitswa nemutengesi wedu uye mugadziri weTV John de Mol Ndiani anobva atiudza ne100% chokwadi chekuti tinogona kuvimba nenyaya idzi dzese? Ndiani anotiudza kuti hatisati tave nemakore tichiona uchapupu hwenhema? Ah, mirira! Vezvenhau vachakuudza. Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek, Jeroen Pauw nevamwe vazhinji vanoita mazano. Mushure mezvose, ivo vanoita yako pfungwa. "Vimba nesu uye ese enhema enhau anobva kuRussia"
Ndiri kuona VaWillem Holleeder zvinoshamisa vachinakidzwa nejongwe naCor van Hout, Willem Endstra uye Theo van Gogh pazvitsuwa zveWaikiki. Isu tinofunga kuti tinoziva zviri kuitika munyika, nekuti yedu worldview yakazara ruvara nemapepanhau, radio uye TV. Nhau dzezvemagariro evanhu dzakachengetedzwa nehurumende dzekunzwisisa manejimendi, iro rinotungamira nhaurirano munzira yaunoda. Deepfake fake profiles (inosanganisira yakatendeseka pasocial network) inogona kuiswa zviri nyore pane izvi. Hapana chatinoziva. Isu tinofunga isu tinoziva, asi kufunga uku kwakave kwakavezwa neboka diki vari kutungamira midhiya nenhau dzemagariro. Iyo firimu 'Wag imbwa'kutamba kwemwana uchienzaniswa nezvatinoona mazuva ese.
Source chinyorwa listings: parool.nl, imdb.com, renziyard.nl
Mhinduro kubva kunaJohn de Mols 'ANP nyanzvi dzevhangeri bounty hunters PermissionMachine.com
ANP yaJohn de Mol, Mvumo yeMvumo, ruzivo rwekodzero dzekodzero 2: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders BV
Maas mumutemo unopesana nezvirevo zveJohn de Mol's ANP uye 'bounty hunters' Permission Machine.com
Kusika kwe 'Fuck John de Mol's Permission Machine Foundation'
Tags: ANP, DNA, Featured, Freddy Heineken, john de mol, nhau dzakaipa, Nick Hoogendijk, Press office, Peter R. de Vries, Rob Scholte, Willem Holleeder, Yolanthe Cabau
Nyanzvi chidimbu zvakare! Thanks!
Zvirokwazvo izvi zvakadaro…. Ini ndaisatomboziva kuti de Mol anga atove muridzi we ANP.
Mune yangu ndobvunza iyo Noses yekutsvagira, ndinoziva mushure meazhinji fluff kuti iyi ndiyo kirabhu iri shure kwezvese. Heineken, semuenzaniso, iri kunze kwemubhadharo wekubiridzira nasekuru Petrosen, anobva kuna amai vake Carla Breitenstein, mubvunzi waNazi.
Zvakanaka iwe unogona kufunga, saka chii, yuck, kupusa sei. Dai pasina ini kuti ini ndinopedzisira ndakanyanya kusimba nehukama uhwu kana zvasvika kune rima, zvinhu zvinotyisa zvisingakwanise kushivirira mwenje, kuti inofanira kunge iri, kuongorora uku.
Heineken arimo mune bhuku dema raEpstein ... saka akauya kuchitsuwa icho ..
Mupurisa Klaas Wilting ndiye zvakare mubvunzo wemhino. Iwe unofanirwa, nekuti hauvimbi chero munhu neaya marudzi enhema, kunze kwekunyeya kwakawanda kusati kwambozivikanwa nenyika.
Holleeder ndeyechokwadi inotozivikanwa nemhino dzayo.
Talpa ine chiratidzo chemuti weKabbalah; iyo talmudic huro bhuku rakazara manipulations ayo anogamuchira zvakakwana ichi kirabhu. Unogona kuvadaidza kuti "maLififerians," "Cabal," kana Sabbateans.
Ini ndinovadaidza kuti "fake jira." Uri ipapo kubva kune anti-Semitism whining, izvo zvavakaita zvinosimbisa.
Sekuru de Mol zvakare vaive nemhino. Asi Linda naJohn, saBil Gates, vanogona kunge "vakavandudza" iyo; zvinomira kunze zvishoma.
Miitiro yekirabhu iyi inotyisa zvekuti haugone kuifuratira.
Mukutsvagisisa kwangu ndakawana aya mazita ese:
Epstein ndiye aive ambuya waVa Askhenazies.
Trotzky, Lenin, Stalin, Marx, Yeltsin, Putin, Bush, Clinton-Rodham, Obama (amai), Trump (jaja), Melanie, Netanyahu, Antony Weiner, Weinstein, Durtoux-kesi, Mossad, Issis, Cia, Mike Pompeo, Rothschilds, Hitler, Papa Francis, Zorreguieta, Windsors, Churchill, Beatrix uye vedu 'Alfred Henry (Freddy) Heineken', amai vake ndibvunza. zvakare, Carla Breinstein, Soros
Einstein, Darwin, Steven Spielberg, Bill Gates, Glenn Pedyo, Kissinger, Tangidza, Murdock, Dick Cheney, JP Morgan, Mussolini, Buzz Aldrin (Nasa fake moonlanding).
Trudeau, Aldous Huxley, Charles naJared Kushner, Jacky Kennedy, Appelbaum Fam. (Ndiani anonyora nyaya yenhema yeBolshevik mushure mekuuraya Solshenytsyn), Darwin, Queen Elizabeth, Al Gore,
Maxwell (Robert we 'girazi', naGishlaine), Zimbardo (muedzo wekunyepa wemaonero), Fam. Kravis, varidzi veMacron uye jpgberg, 5G pusher (FDA) Brad Gillen, Richard Branson, Boris Johnson, May, Thatcher, Sarkozy, Rockefellers, Julie Gerberding (CEO Merck), Robert Gallo mugadziri weAids,
Vezvematongerwo enyika muNetherlands; Cohen, Asscher, Kok, Klaver, van Agt, Timmermans, Deijsselbloem, Schippers, Demmink, Hiddema, Peter R. de Vries, Juan Guaido (Venezuela) Jair Bolsonaro (Brasil), Zorreguieta (baba M.), Victoria Nuland (Kagan mhuri, yakaparadzwa Ukraine), Timmermans, Juncker (EU) Nixon, Rockefeller, the Bolsheviks ... nezvimwewo.
Muchidimbu, zvakakwana kunetseka chaizvo nezve. Zvakanyanya kuomesa zvese; pakupedzisira ubudirire. Asi ivo imasters mune hunyanzvi hwekunyengera.
Mukati meTalpa unoona Gordon, Albert Verlinde, CEO Peter de Mönnink, Jan Versteeghe etc. uye wekupedzisira asi asiri mashoma Lil Kleine, uyo akadana mwanasikana wake 'Ziyoni'.
Chimwe chakawanikwa ndechekuti Cor van Hout naTheo van Gogh vese vane misoro yakafanana. Uye zvirokwazvo Theo ane 'mhino' zvakare. Rob Scholten futi. Izvo zvakajeka kwazvo kwandiri kuti kune "mweya" mumwe kumashure kweshure kwe squander yepasi panguva.
Masango ari pamoto. Zvave zvichinakidza. Izvi zvinofanirwa kuuya pachena.
Ndatenda Vrijland, asi usafunge kuti ndeye bastard, munhu wese akaona izvozvo kubva kure
kurwiswa kwakaitwa naRob Scholte kwaive nemweya wemweya mutsva, asi vamwe vatambi vacho vanogona kunge vanga vari vashandi nehurumende. Kuisa nyeredzi Mr. Scholte pachavo, kubatana nesimba uye kutamba imbwa yakarumwa kunze nekuda kwesimba rakafanana (hurumende), rudzii rwekubereka ihwohwo?
Kubvunzurudzwa kunoratidzwa naAnz Scholte pane webhusaiti yake kubva kuBhawa hakuna kumbokwana kwaari, haana kana chekuita neruzhinji kufarira .... asi vapomeri vanongofamba vachitenderera ....
Ehe, havasi vese vanobvumidzwa kupenda muRoyal House sezvakangoita, ipapo ndiwo mufananidzo.
Uye zvakadiniko nezve basa raMick Hoogendijk? ari kusundira iyo transgender ajenda nenzira yemapikicha, zvidimbu zvepuzzle zvinowira pamwechete zvakanaka nenzira iyi.
Vezvenhau vanova nechokwadi chekuti vanhu chaivo vanonetsa saMartin Vrijland havana kukudzwa mumapepanhau kana TV, De Mol anoramba ari Mol, uku kubereka chaiko! ? Kuvhiringidza kubereka
Ndizvowo zvakati wandei zveizvi zvirevo zvekufungidzira.
1 Kubiwa kwaHeineken kupambwa kwekunyepedzera uye kwakaitwa nhanho, saka hazvina kumboitika
2: Rob Scholte anga asina bhomba (ruoko grenade) pasi pechigaro chake, wow!
uye: 3 yechokwadi iyo TV TV kururamisa kwepasipasi kwevanhu vachishandisa ... nyeredzi
Uye hapana munhu anopa maitiro, kunyange kubva kubato raHeineken naRob Scholte? ipapo ungangofunga kuti hazvingagone kuve kufungira.
« Chii chiri chokwadi nezvekurwiswa nerufu semhedzisiro yekufamba netsoka mu Assen?
KUSVIRA: piritsi rekuvandudza ichokwadi! 80 Makore-makore murume akomana kekutanga kumedza mushure mekuyedzwa kumhuka »
Kushanya kwakazara: 4.243.137
Jos De Jong op Coronavirus covid-19: izvo zvatisinganzwe nezvaMaurice de Hond naWillem Engel, chikamu 2
kc2211 op Coronavirus covid-19: izvo zvatisinganzwe nezvaMaurice de Hond naWillem Engel, chikamu 2